ओली सरकारले फेरि बढायो पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य-आज जनताको ढाड सेक्न माइतीघर मण्डला बन्दगरेको ? – Todays Nepal
ओली सरकारले फेरि बढायो पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य-आज जनताको ढाड सेक्न माइतीघर मण्डला बन्दगरेको ?
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले आज रातिदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई–दुई रुपैयाँ बढाएको छ ।
बढेको मूल्य अनुसार अब पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ६ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले यसअघि चैत १९ गते मात्र पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलको भाउ दुई रुपैयाँले बढाएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि पेट्रोलिय पदार्थमा भएको यो दोस्रो मूल्यवृद्धि हो ।
यदि तपाईको बच्चाको पढ्न लेख्न कमजोर छ भने उसमाथि कुनै पनि किसिमको दबाब बनाउनु भन्दा पहिले उसको दैनिक खानपानमा केही सुधार गर्नुहोस् । बच्चाको मस्तिष्कलाई तेजिलो बनाउन केही खाद्यवस्तुहरु उसको दैनिक आहारामा राख्नु भयो भने त्यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
अण्डामा धेरै भिटामिन पाइन्छ जसले बच्चाको मस्तिष्क विकासमा ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ । अण्डाको सेवन गर्नाले बच्चाको स्मरणशक्ति पनि बढ्नुका साथै शारीरिक स्फूर्ति बढ्छ । बच्चाको तेजिलो दिमागका लागि प्रत्येक दिनको आहारामा एउटा अण्डा राखिदिनुहोस् ।
स्ट्रबेरीमा एन्टी अक्सिडेट्सको राम्रो मात्रा पाइन्छ यसले मस्तिष्कको कार्य सम्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्छ । साथै यो स्वादिलो हुने हुँदा बच्चाले यसलाई पूर्ण सेवन गर्नसक्छ । यसलाई दैनिक सेवन गर्नाले बच्चाको मस्तिष्क तेजिलो बन्छ ।
बजारमा पाइने ओट्सले मस्तिष्कको लागि अति आवश्यक इन्धनको रुपमा काम गर्५ । यसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तेज गतिमा चल्ने र राम्रो काम गर्ने बनाउँछ । चिकित्सकहरु पनि ओट्सको सेवन गर्ने सल्लाह दिन्छन् ।
Breaking… सिरिया त सकिने भयो साथमा बिश्व कै अन्त्य यसरी हुदैछ
सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी बोर्डिङबाट सरकारी स्कूलमा सरुवा, बोडिङ स्कुल भट्टाभाट बन्द हुने यस्तो छ संकेत